ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ - အများပိုင်သတင်း။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B Marketplace သတင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 11, 2021 မေလ 10, 2021 George Keburia	မှတ်ချက် Leave
အစုရှယ်ယာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အရင်းအနှီးတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းများစွာသည်မသေချာမရေရာမှုများနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည်။ သင်ယုံကြည်သောအရာတစ်ခုခုသို့ငွေအချို့ထည့်သွင်းခြင်းသည်အကျိုးရှိပြီးအမြတ်အစွန်းဖြစ်လာပြီး ၀ င်ငွေသည်ကန ဦး အပ်ငွေနှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အခြေအနေတိုင်း၌မဟုတ်ပါကအရာရာတိုင်းသည်ယုံကြည်သည်သို့မဟုတ်မျှော်လင့်သည်နှင့်တူညီကြသည်။
မေလ 5, 2021 မေလ 3, 2021 Sierra Powell	မှတ်ချက် Leave
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူလိုပါကလူတိုင်းစဉ်းစားသင့်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည်ဖြစ်စေမရွေးချယ်သည်မှာသင်၏ဝင်ငွေနှင့်မည်သို့စီစဉ်ထားသည်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့သင့်တော်တဲ့အချိန်ကဘာလဲလို့မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဖြင့်သင်သည်မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆိုစတင်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏အငြိမ်းစားယူသည့်အသက်အရွယ်သို့ရောက်သော်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီရန်စောစီးစွာစတင်ရန်အကြံပြုသည်။
ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မသိသောအရာ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 27, 2021 ဧပြီလ 26, 2021 Tracie ဂျွန်ဆင်	မှတ်ချက် Leave
လူတို့သည်အဖိုးတန်သတ္တုများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စဉ်းစားသောအခါရွှေအကြောင်းစဉ်းစားကြသည်။ ရွှေသည်၎င်း၏တန်ဖိုးကိုထိန်းထားနိုင်သည့်ထူးခြားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ငွေသည်တက်ကြွ။ အမြတ်အစွန်းလည်းရသည်။ ငွေသည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ကြွယ်ဝမှုကိုထိန်းသိမ်းသည်။ ငွေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သင်မသိရနိုင်သောအရာအချို့ရှိပါသည်။
၃ AI ခေတ်ရေစီးကြောင်းဘဏ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်သို့ပြောင်းလဲခြင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 22, 2021 ဧပြီလ 20, 2021 Matt Thurston	မှတ်ချက် Leave
ဘဏ်လုပ်ငန်း၌ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းမှုအရှိန်အဟုန်မှာလွန်ခဲ့သောနှစ်အတွင်းအရှိန်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဘဏ်များသည်များပြားလှသောဒစ်ဂျစ်တယ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ပြီးဖောက်သည်အချက်အလက်အမြောက်အမြားကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကြီးမားသောဒေတာပမာဏကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည့်အတုထောက်လှမ်းရေးသည်ဘဏ်များကဤအချက်အလက်အားလုံးကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုပြောင်းလဲရန်စွမ်းအားရှိသည်။ အောက်ပါအချက်များသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် AI ခေတ်ရေစီးကြောင်းသည်ဘဏ္bankingာရေးဘဏ်လုပ်ငန်းကိုသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ကဏ္ three သုံးခုဖြစ်သည်။
Bitcoin သည်မတ်လကတည်းကအဆိုးရွားဆုံးသောအပတ်သို့ ၆% ခေါင်းကိုနစ်မြုပ်စေသည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အဆိုပါ Bitcoin စျေးနှုန်း 6% ကျဆင်းခဲ့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအစိုးရငွေချေးစာချုပ်များ၏အထွက်နှုန်းများမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်စွန့်စားမှုများပြုလုပ်ရန်စဉ်းစားထားသောပိုင်ဆိုင်မှုများရောင်းအားကျဆင်းခြင်းတို့ကြောင့်နှစ်ပတ်တာနိမ့်ကျမှုမှသောကြာနေ့တွင်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး cryptocurrency သည် $ 44,451 သို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြန်လည်မရောက်ရှိမီ $ 47,300 သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။
အဆိုပါ "Buy-In" Cryptocurrency ကိုခိုင်ခံ့စေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
Bitcoin, လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်တန်ဖိုးအ cryptocurrency, မှတ်တမ်းများကိုချိုးဖျက်နေဆဲဖြစ်သည်။ သောကြာနေ့မှာအမြင့်ဆုံးသွားတယ် အရင်းအနှီးအတွက် $ 1 ထရီလီယံ၏တံခါးခုံCoinMarketCap မှအချက်အလက်များအရ cryptocurrency ၏တန်ဖိုးသည်ဒေါ်လာ ၅၄၀၀၀ ကျော်လွန်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင်ဆက်လက်မြင့်တက်ခဲ့သည်။
မြင့်မားသော Floating အီ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2021 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ကို virtual ငွေကြေးစျေးနှုန်းသိသိသာသာမြင့်တက်ဆက်လက်။ ပြီးနောက် Bitcoin နောက်တဖန်ထိပ်ဖဲ့နှင့် Ethereum (ETH) ကဒေါ်လာ ၅၆၀၀၀ ကိုဖောက်ခဲ့တယ် ဒုတိယအကြီးဆုံး virtual ငွေကြေးသည်လည်းဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ကျော်လွန်သွားပြီးဈေးအသစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Coindesk ၏အချက်အလက်များအရ Ether သည် ၂၄ နာရီအတွင်းဒေါ်လာ ၂၀၃၆ အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးစျေးနှုန်းမှာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်ကာဒေါ်လာ ၂၀၃၀ အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။
Virtual Dolls အတွက်ရီးရဲလ်ဒေါ်လာရောင်းဝယ်ခြင်း
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2021 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
Bitcoin ၏ virtual ငွေကြေးသည်ယခုအချိန်အထိ၎င်း၏အထက်သို့တက်နေသည်။ အဆိုပါ $ 53,000 အမှတ်အသားမှတဆင့်ကိုချိုးဖောက် နှင့်မြင့်မားသောအသစ်တစ်ခုကိုနှိပ်။ Coindesk ၏ဖော်ပြချက်အရဒေါ်လာ ၅၃,၂၄၈.၀၆ အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ယခုအခါဒေါ်လာ ၅၃,၂၁၇.၄၇၊ ၂.၀၆% တိုးလာပြီးစျေးကွက်တန်ဖိုးမှာဒေါ်လာ ၉၉၁.၅၆ ဘီလီယံဖြစ်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 18, 2021 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ
“ Dogs of the Dow” ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည့်သမိုင်းကြောင်းနှင့်ရေရှည်အောင်မြင်မှုတို့ကြောင့် Durig ၏ပြုပြင်ထားသောပုံစံကိုတွေ့ရခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ နှင့် S & P 500 ၏ခွေးများ ရေရှည်အောင်မြင်မှုဆီသို့အလားတူလမ်းကြောင်းကိုခြေရာခံမဟာဗျူဟာများ။ တကယ်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအလားတူနည်းဗျူဟာတစ်ခုချမှတ်ရန် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မေလကကနေဒါကုမ္ပဏီများအားတိုးပွားလာသောအမြတ်အစွန်းများပေးဆပ်သည့်သမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့သည်။
$ 52k ကျော် Bitcoin ပေါက်ကွဲမှု
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 18, 2021 ဧပြီလ 12, 2021 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
အထက် $ 50,000 နေ့ချင်းညချင်းပြန်လာသောပြီးနောက်Bitcoin ၏စျေးနှုန်းသည်ဆက်လက်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးတစ်ရက်အတွင်းအနိမ့်ဆုံးမှဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ထက်ပိုမိုသောဒေါ်လာ ၅၂၆၀၀ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင် Bitcoin သည်ဒေါ်လာ ၅၂,၂၁၀.၇၆ ကို ၂၄ နာရီအတွင်း ၇% ကျော်တိုးမြှင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိခိုက်သည် Bitcoin (BTC) တစ်နေ့တွင်းအမြင့်ဆုံးအသစ်များကို ဆက်၍ တည်ဆောက်နေသည်၊
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသော Stablecoin ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြီးထွားလာဆက်စပ်မှု
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 9, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2021 ဂျူလီမစ်	မှတ်ချက် Leave
ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသော Stablecoins များမှာ Tether (USDT), USD Coin (USDC), DAI, Binance USD (BUSD) နှင့် HUSD တို့ဖြစ်သည်။ Stablecoins များသည်အမျိုးအစားအလိုက်အမျိုးမျိုးသောပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်လာသည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်၊ crypto-collateralized၊ ကုန်စည် -caterateralized နှင့် seigniorage-share အပေါင်ပစ္စည်း။
နိုင်ငံအသီးသီးမှဗဟိုဘဏ်များမှထုတ်ပေးသောအဓိကကျသောငွေကြေးများကဲ့သို့ပင်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောတည်ငြိမ်သောငွေများကိုငွေလဲလှယ်သည့်အနေနှင့်ဖြစ်စေငွေစာရင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဖြစ်စေအသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခုအခါငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများသည်အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေကြသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချ Stablecoins ၏ဖန်တီးမှု.
Dogecoin Crypto Tesla Motors ၏စီအီးအိုမှအကျိုးခံစားခဲ့ရသည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2021 Doris Mkwaya
Tesla Motors ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည်ဈေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ Dogecoin အကြောင်းတွစ်တာတွင်ပြောကြားခဲ့သည် Dogecoin တခါထပ်မြင့်တက်လာသည်။ Dogecoin တွင်ထူးခြားသည့်သမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူနှစ် ဦး အကြားအင်တာနက်အခြေပြုငွေလွှဲခြင်းစနစ်အဖြစ်ဖန်တီးထားခြင်းခံရသည် - အင်္ဂလန်မှဖြစ်ပြီးကနေဒါမှဖြစ်သည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
အဆိုပါကြေငြာချက် ရိုက်တာသတင်းဌာန စပ်လျဉ်း၌ SWIFT တရုတ်အမျိုးသားဘဏ်၏သုတေသနဌာနနှင့်ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း။ ထို့ကြောင့် SWIFT သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေပေးငွေယူမှုစနစ်အသစ်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2021 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
S&P 500 အညွှန်းကိန်းသည် ၃.၀၈၆.၈၁ မှတ်သို့ ၁၅.၁၀ မှတ်သို့မဟုတျ ၀.၃၉% မြင့်တက်ခဲ့ပြီး၊ အဆိုပါ Nasdaq အညွှန်းကိန်း 15.10 မှတ်သို့ 0.39 မှတ်, ဒါမှမဟုတ် 3,886.81% မြင့်တက်; Dow Jones အညွှန်းကိန်းသည် ၉၂.၄၀ မှတ်၊ သို့မဟုတ် ၀.၃၀%၊ ၃၁,၁၄၈.၂၄ မှတ်သို့မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဒီရက်သတ္တပတ်ရဲ့လမ်းပေါ်မှာ။ အညွှန်းကိန်းသည် ၃.၉%၊ S&P သည် ၄.၇%၊ Nasdaq သည် ၆% မြင့်တက်ခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ မှစတင်၍ ၎င်းတို့၏အပတ်စဉ်အမြတ်အများဆုံးရရှိခဲ့သည်.
Alibaba Group မှလစဉ်အမြတ်ငွေများကိုအင်္ဂါနေ့တွင်တင်မည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2021 ဇန်နဝါရီလ 31, 2021 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
Alibaba Group သည် ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင်အဆုံးသတ်သောပထမသုံးလပတ်အမြတ်ငွေကိုကြေငြာမည် အမေရိကန်စျေးကွက်အင်္ဂါနေ့တွင်ဖွင့်လှစ်မီ, 2, ဖေဖော်ဝါရီလ 2021, နှင့်ဘဏ္resultsာရေးရလဒ်များကိုဆွေးနွေးရန်ကွန်ဖရခေါ်ဆိုခကျင်းပပါလိမ့်မယ်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီအား၎င်း၏ထုတ်လွှတ်မှုအကြောင်းပြချက်အားအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ ဝင်ငွေရရှိမှုသုံးလတစ်ကြိမ်အစီရင်ခံစာများ။
အမေရိကန်စတော့အိတ်ချိန်း - စျေးကွက်တည်ဆောက်ပုံပြောင်းလဲခြင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 31, 2021 ဇန်နဝါရီလ 30, 2021 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
Coronavirus ကာကွယ်ဆေးထောက်ပံ့ရေးအငြင်းပွားမှုအသစ်ကြောင့်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကဥရောပနှင့်အတူကမ္ဘာ့လက်လီရောင်းဝယ်ရေးနှင့် Wall Street ခြံရံပုံငွေတို့သည်ပwithိပက္ခကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း၊ အမေရိကန်စတော့ရှယ်ယာများဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီးပြိုလဲDow သည်အချက် ၆၀၀ ကျော်ကျဆင်းခဲ့သည်။ Goss Electronics သည် ၅၂.၅၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ Express က ၂၇.၀၂%၊ AMC Cinemas သည်ယခုအပတ်တွင် ၂၈၀ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပြီး Game Station သည် ၄၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။
အများပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကစာရင်းကိုင် - ခြားနားချက်ကိုသိ
ဇန်နဝါရီလ 28, 2021 ဇန်နဝါရီလ 27, 2021 ရှမ်း	မှတ်ချက် Leave
စာရင်းအင်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘွဲ့၏လက်တွေ့ကျသောအသုံးချမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စာရင်းအင်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုလေ့ကျင့်သည်။ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူစာရင်းကိုင်၏အတွင်းပိုင်းကနေရှေးခယျြဖို့အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနယ်ပယ်နှစ်ခုရှိပါတယ်။
Alibaba ၏ Ant Group ၏ခန့်မှန်းခြေတန်ဖိုးသည် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်
ဇန်နဝါရီလ 24, 2021 ဇန်နဝါရီလ 24, 2021 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
အလီဘာဘာ၏ Ant အုပ်စု၏တန်ဖိုးသည်ဒေါ်လာ ၁၀၈ ဘီလီယံသို့ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ ဒါ အဆိုအရ Bloomberg ထောက်လှမ်းရေး။ ဤအခြေအနေမှာတရုတ်အာဏာပိုင်များကပြုလုပ်နေသည့်ကုမ္ပဏီ၏ယုံကြည်မှုအားဆန့်ကျင်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ Bloomberg မှလေ့လာသူ Francis Chan ၏အဆိုအရ Ant Group သည်မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ထားသောစည်းမျဉ်းများကြောင့်တန်ဖိုးဖြတ်မှုတစ်ဝက်ကျဆင်းသွားနိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
XL Fleet သည် Biden အုပ်ချုပ်ရေးတွင်ကြီးမားသောအကျိုးအမြတ်များကိုစောင့်ကြည့်ရန်စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုဖြစ်သည်
ဇန်နဝါရီလ 24, 2021 ဇန်နဝါရီလ 24, 2021 ဂျိုးဇက်ဘေလီ	မှတ်ချက် Leave
Biden အုပ်ချုပ်ရေးအသစ်သည်သူတို့၏မူဝါဒကိုစတင်ကျင့်သုံးလာသည်နှင့်အမျှရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုသည်ရှေ့တန်းနှင့်အလယ်ဗဟိုဖြစ်သည်။ အစိုးရကမကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ပါရီရာသီဥတုသဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီးကနေဒါရေနံစိမ်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့သယ်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်သော Keystone ပိုက်လိုင်းကိုပိတ်ဆို့လိမ့်မည်။
Bitcoin ၏မတည်ငြိမ်သောအပတ်က Crypto ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းအပေါ်ယုံကြည်မှုလျော့နည်းစေသည်
ဇန်နဝါရီလ 23, 2021 ဇန်နဝါရီလ 24, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
Bitcoin ၏ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တွင်ဒေါ်လာ ၄၂၀၀၀ နီးပါးစံချိန်တင်မှုသည်လှုံ့ဆော်မှုများပြားနေသောဘဏ္financialာရေးစျေးကွက်များတွင်စွန့်စားမှုလက်ခံမှုကိုဖော်ပြသည်။ ယခုအပတ်၏ပြင်းထန်သော Bitcoin ရောင်းအားသည်အသစ်တစ်ခုကိုမြှင့်တင်နေသည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ အဆိုပါ cryptocurrency စန်း၏။ ယခုအပတ်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများသည် ၁၄% ကျဆင်းခဲ့ပြီးမတ်လနောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးကျဆင်းခဲ့သည်။
ကြွေးမြီ - ကောင်းမကောင်း
ဇန်နဝါရီလ 22, 2021 ဇန်နဝါရီလ 21, 2021 Mandeep Singh က	မှတ်ချက် Leave
ငွေချေးသူတစ် ဦး အတွက်ကြွေးမြီသည်သင်၏အသားတင်အမြတ်တိုးစေသည့်အကြွေးဖြစ်သည်။ ဤသည်နည်းလမ်းများစွာအတွက်ဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။ အခြားအခွင့်အလမ်းများကိုအာရုံစိုက်ရန်သင့်အားအချိန်ကုန်သက်သာစေသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (သို့) လူများ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်သည်အကြွေးတင်နိုင်သည်။ ကျောင်းသားချေးငွေများသည်ပိုမိုမြင့်မားသော ၀ င်ငွေရရှိစေမည့်ပညာရေးကိုထောက်ပံ့သည်။ သင့်အိမ်၏တန်ဖိုးနှင့်သင့်ဘဝ၏အရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်စေမည့်အိမ်တိုးတက်မှုချေးငွေများ။ သင်၏စုဆောင်းငွေချေးခြင်းကဲ့သို့သင်၏ဘဏ္ancesာရေးများကိုစီမံရန်ကူညီသောအကြွေးကိုလည်းကောင်းမွန်သောကြွေးမြီအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အကြွေးနည်းနည်းနဲ့အချိန်မီပြန်ဆပ်တာကောင်းတယ်၊ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ရမှတ်ကိုတိုးတက်စေတယ်။ ၎င်းသည်နောင်တွင်ကောင်းမွန်သောကြွေးမြီကိုယူရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါကသင်ချေးငှားနိုင်လိမ့်မည်။
(altcoins) နှင့် BTCS ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိအသစ် Bitcoin ဆက်စပ်မြင့်တက်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 15, 2021 ဇန်နဝါရီလ 14, 2021 ဂျိုးဇက်ဘေလီ	မှတ်ချက် Leave
BTCS, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် blockchain နည်းပညာသည်လူသိများသောကုန်သွယ်မှုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ Bitcoin များအတွက်စျေးနှုန်းများသည်သူတို့၏မကြာသေးမီကာလများမှဆုတ်ခွာသွားသောအခါ၊ အခြား cryptocurrencies ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အထူးသဖြင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္financeာရေး (DeFi) ကဏ္ectorခွဲနှင့် Bitcoin နှင့်ဆက်စပ်သောစတော့ရှယ်ယာများမှ (BTCS) ကဲ့သို့သောမြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဆီသို့ပြောင်းလဲနေကြောင်းဖော်ပြသည်။ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
Sundial စိုက်ပျိုးသူများ - သူတို့၏ ၂၁၂၁ အထင်ကြီးလောက်သောစွမ်းဆောင်ရည်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အလားအလာကောင်းများသို့ကူးပြောင်းသွားသည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 12, 2021 ဇန်နဝါရီလ 18, 2021 ဂျိုးဇက်ဘေလီ	မှတ်ချက် Leave
၂၀၂၀ သည်ကုမ္ပဏီအများစုအတွက်ကဲ့သို့ Sundial စိုက်ပျိုးသူများအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာ ၂၀၂၀ မှာဒေါ်လာသန်း ၂၂၀ အကြွေးတင်ပြီး Covid-2020 ဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုစိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီများစွာနှင့်မတူဘဲ Sundial စိုက်ပျိုးသူများသည် ၂၀၂၀ တွင်ဘဏ္strongerာရေးအရပိုမိုအားကောင်းလာပြီး ၂၀၂၁ တွင်ရှယ်ယာရှင်များတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်အကောင်းမြင်လာသည်။
Romeo Power သည် SPACs Pullback ကိုမကြာသေးမီကဖမ်းမိထားခြင်းသည်ယနေ့တွင်အသိပေးထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အိပ်မက်များဖြစ်သည်
ဇန်နဝါရီလ 4, 2021 ဇန်နဝါရီလ 3, 2021 ဂျိုးဇက်ဘေလီ	မှတ်ချက် Leave
Romeo Power ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ယခင်တက်စလာနှင့် SpaceX ၀ န်ထမ်းများစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်စွမ်းအင်သိုလှောင်ရေးအတွက်အောက်ပါအဓိကစျေးကွက်များအပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည် - ကုန်တင်ကားများ၊ ဘတ်စ်ကားများ၊ အလယ်အလတ်နှင့်အလွန်လေးလံသောလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မော်တော်ယာဉ်များအပါအ ၀ င်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးယာဉ်များ။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ထိပ်တန်း Token Development Platforms ၅ ခု
ဒီဇင်ဘာလတွင် 27, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 26, 2020 Ronon Margo	မှတ်ချက် Leave
ယနေ့ခေတ်တွင်လူများစွာသည်ဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းခြင်းသို့ ဦး တည်နေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အလုပ်ကိုလျော့နည်းစေပြီး၊ ယခုအချိန်တွင် blockchain နည်းပညာသည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။ မင်းငါ့ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ crypto တိုကင်တွေသတိထားမိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားနှစ်ခုစျေးကွက်အတွက်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သို့သော်စတင်တည်ထောင်သူများနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များစွာသည်ရန်ပုံငွေရှာခြင်းအတွက်ထူးခြားသောလက္ခဏာသက်သေတစ်ခုဖန်တီးရန်လက္ခဏာသက်သေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမကြာခဏနှစ်သက်ကြသည်။
သင်၏ငွေကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်စတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်သည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 18, 2020 Sierra Powell	မှတ်ချက် Leave
ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်သင်၏ငွေများကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးစတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတဆင့်အနာဂတ်အတွက်ကြီးမားသောအကျိုးအမြတ်များရရှိနိုင်သောစီမံကိန်းများပေါ်တွင်သင်၏ငွေကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူဖြစ်ပါက ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်သင်စတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်သည့်အဓိကအကြောင်းအရင်းအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြခဲ့သည်။
10 Ideal အမြတ်အစွန်း Blockchain စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်များ 2021 ခုနှစ်တွင်စတင်ရန်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 15, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2020 Akshara Singh က	မှတ်ချက် Leave
blockchain ဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးအတွေးအခေါ်များကိုသင်ရှာဖွေနေပါသလား။ ထို့နောက်သင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည်။ အောင်မြင်မှုအတွက်ရေငတ်မှုကြောင့်ဤဆောင်းပါးကိုသင်မှန်ကန်စွာရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ပြီလား။ ကျွန်ုပ်တို့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင်လာမည့်နှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အဖြေရဆုံးနှစ်ဖြစ်ရန်အမြဲဆုတောင်းနေကြသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ blockchain စီးပွားရေးခရီးအတွက်အထူးခြားဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါစို့။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 11, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 11, 2020 လီနာ Hemsworth	မှတ်ချက် Leave
ဒီနှစ်မှာငါတို့ကိုသင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ကိုကြိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်နည်းလမ်းမရှိတော့ဘူး။ သင်၏အစီအစဉ်များအားလုံးကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးသင်၏သို့မဟုတ်သင်၏မိသားစု၏အနာဂတ်ကိုအန္တရယ်ဖြစ်စေမည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေမည်သည့်အချိန်တွင်ပေါ်ပေါက်လာမည်ကိုသင်မည်သည့်အခါကမျှသင်မသိပါ။ လူတိုင်း၏နံပါတ်တစ် ဦး စားပေးရမည့်အရာသည်မိမိတို့ချစ်ရသူများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှုဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြစ်ရပ်များအတွက်တတ်နိုင်သမျှပြင်ဆင်ထားရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤနည်းဖြင့်အဆိုးဆုံးအဖြစ်အပျက်များကြုံရလျှင်ပင်သင့်မိသားစုကိုဂရုစိုက်လိမ့်မည်ဟုသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ သင့်မိသားစုနှင့်သင်၏အနာဂတ်ကိုကာကွယ်ရန်သင်ပြုလုပ်သင့်သည့်အရေးကြီးသောအဆင့်အနည်းငယ်ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 7, 2020 လင်ဒါဂျွန်	မှတ်ချက် Leave
multi cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတစ်ခုထက်ပိုသော cryptocurrency ကိုထောကျပံ့သောသူတို့အားပိုက်ဆံအိတ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းတွင်အချက်နှစ်ချက်ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ အပြန်အလှန်ငွေပေးချေမှုများကိုအလိုအလျောက်ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောကုန်သွယ်မှုနှင့်အသုံးပြုသူများအတွက်သီးသန့် QR ကုဒ်နံပါတ်များပါရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ငွေကြေးပေါင်းစုံသောပိုက်ဆံအိတ်များသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းထားခြင်းမရှိသော၊ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူ၊
DEFI Staking Platform Development မှတစ်ဆင့်သင်၏ဝင်ငွေကိုအကောင်းဆုံးရယူပါ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 6, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2020 isa Charlotte	မှတ်ချက် Leave
လောင်းကြေးဆိုသည်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ရန်ပုံငွေများမှ passive ဝင်ငွေကိုရရှိနိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Crypto ဒင်္ဂါးပြား (သို့) တိုကင်အချို့ကိုပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်လဲလှယ်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်လောင်းထားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် Proof of Stake (PoS) ယန္တရားပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ အတည်ပြုသူများသည်၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သောအရာများအပေါ် အခြေခံ၍ blockchain လုပ်ကွက်များကို ဖန်တီး၍ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သူတို့ပိုက်ဆံအိတ်များကိုပုံမှန်ပေးသောအတိုးနှုန်းဖြင့်သူတို့ကိုဆုချလိမ့်မည်။ Hucoin နှင့် Poloniex စသည့်နာမည်ကြီး cryptocurrency ဖလှယ်မှုများသည် Binance, WazirX, Kucoin, Coinbase, Huobi နှင့် Poloniex စသည့်ဖလှယ်မှုများသည် DeFi ကိုသူတို့၏ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်လောင်းကစားရန်လွယ်ကူစေသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick နိုဝင်ဘာလ 22, 2020 နိုဝင်ဘာလ 22, 2020 S & P 500 ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ပျမ်းမျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ဘဏ္advာရေးအကြံပေးများနှစ် ဦး စလုံးကြုံတွေ့နေရသောအခက်ခဲဆုံးနှင့်ဘုံစိန်ခေါ်မှုများတစ်ခုမှာပျမ်းမျှစွန့်စားမှုအောက်တွင်ရှိသောပျမ်းမျှအမြတ်ငွေရရှိရန်မည်သို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အချိန်ကာလတစ်ခုအကြာတွင်လျင်မြန်စွာနှင့်အလွယ်ကူဆုံးသောဖြေရှင်းနည်းများသည်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောမျှော်လင့်ချက်များမဟုတ်ဟုထင်ရသည့်အရာနှင့်မတူဘဲမကြာခဏဖြေရှင်းတတ်သည်။ မှန်ပါသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံသူတို့သည်ကြီးစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သို့သော်အခြားအချိန်များမဟုတ်ပါ (အားလုံးရှိလျှင်။ )
သင်သိထားရမည့် Custom Custom Cryptocurrency Wallet Development ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခွင့်အရေးများ!
နိုဝင်ဘာလ 20, 2020 နိုဝင်ဘာလ 19, 2020 ရောဘတ် Kroos	မှတ်ချက် Leave
ပထမဆုံးသောဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးအောင်မြင်မှုအပြီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်စတင်ခဲ့သူများစွာသည် cryptocurrencies တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်, crypto စျေးကွက်ခန့်မှန်းရခက်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတွင်အတက်အကျများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်တွင် ပိုမို၍ အရေးကြီးသော crypto ဝေါဟာရများအနက်မှတစ်ခုမှာ cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ဖြစ်သည်။
6.01% Dividends များအတွက်လမ်းကြောင်းအပေါ် S & P ၏ Durig Dogs ကို
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick နိုဝင်ဘာလ 3, 2020 နိုဝင်ဘာလ 3, 2020 S & P 500 ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
၎င်းသည်ရွေးကောက်ပွဲများအတွက်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ စျေးကွက်၏မတည်ငြိမ်မှုသည်လာမည့် ၄ နှစ်တွင်မည်သူသမ္မတဖြစ်လာမည်ကိုခန့်မှန်းရန်ကြိုးပမ်းနေသကဲ့သို့သို့မဟုတ်စျေးကွက်များ၌မတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုများမကြာမီရွေးကောက်ပွဲများပြီးဆုံးပြီးနောက်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအနိုင်ရသူကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်လားခန့်မှန်းရခက်သည်။ အင်္ဂါနေ့။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနိုင်ရခြင်းမရှိလျှင်ဤစျေးကွက်အသွားအလာတိုးပွားလာဖွယ်ရှိပြီးလမ်းညွှန်ပြတ်သားသည့်နိမိတ်လက္ခဏာကိုဆက်လက်ပြသနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ကြသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick အောက်တိုဘာလ 24, 2020 အောက်တိုဘာလ 23, 2020 Claire သဲ	မှတ်ချက် Leave
ငွေသားကဆက်ပြီးသက်ဆိုင်ပါသလား။ ယူရိုရဲ့အနာဂတ်ကဘာလဲ၊ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ငွေသားရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာဘာလဲ။ COVID-19 ပြန့်ပွားမှုအတွက်အရင်းအမြစ်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုအခြေအမြစ်မရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုများဖြင့်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကငွေရေးကြေးရေးထောက်ခံသူများအတွက်ခက်ခဲခဲ့သည်။ ဥရောပတရားမျှတမှုတရားရုံး၏ရှေ့နေချုပ် Giovanni Pitruzzella သည်ဥရောပငွေကြေးစနစ်အတွင်းရှိငွေများအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အချိန်မီအကြံဥာဏ်များထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်မြင့်မားသောလုံခြုံရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူ Crypto Exchange Software တစ်ခုဖန်တီးနည်း
အောက်တိုဘာလ 21, 2020 အောက်တိုဘာလ 20, 2020 Mia Perla	1 မှတ်ချက်
Cryptocurrency ဖလှယ်မှုသည်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်သာမာန်လူသား၏အသုံး ၀ င်မှုအကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးပေးရာတွင်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အမြောက်အများအမြတ်အစွန်းရရှိစေရန်ကူညီခြင်းအပြင် crypto ဖလှယ် software ကို crypto စွန့် ဦး တီထွင်သူများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းဖွင့်ပေးခဲ့သည်။
သင်၏ Cryptocurrency Exchange Development အတွက်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များမှာအဘယ်နည်း။
စက်တင်ဘာလ 9, 2020 စက်တင်ဘာလ 9, 2020 Mia Perla	2 မှတ်ချက်
လက်ရှိဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲနေသောခေတ်တွင် cryptocurrencies နှင့် blockchain နည်းပညာသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအနှောင့်အယှက်ပေးပြီး၎င်းတို့အားအရောင်းအ ၀ ယ်စီမံခန့်ခွဲပုံတွင်ပါရာဒိုင်းပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တစ်နေ့လျှင်တစ်ရက်လျင်မြန်စွာအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာနေပြီးလူ ၁၀ ဦး လျှင်အနည်းဆုံးတစ်ယောက်သည် cryptocurrencies နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းမှာအဓိကအားဖြင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုများတိုးပွားလာနေသည်။ crypto ဖလှယ် software ကို.
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်သင် Cryptocurrency ဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်
စက်တင်ဘာလ 9, 2020 စက်တင်ဘာလ 9, 2020 Akshara Singh က	မှတ်ချက် Leave
'cryptocurrency' ဟူသောစကားလုံးကိုသင်ကြားသောအခါသင်စိတ်ထဲဘာဖြစ်သွားသနည်း။ အချို့လူများက၎င်းသည်ထူးဆန်းသောစကားလုံးဟုထင်ကြလိမ့်မည်၊ အချို့က၎င်းသည်ငွေကြေးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်ငွေကြေးအမျိုးအစားသို့မဟုတ်ထူးဆန်းသောစကားလုံးမဟုတ်ပါ။ cryptocurrency သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် blockchain ဟုလူသိများသည့်ရှုပ်ထွေးသောနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ လုံးဝတီထွင်ခဲ့သည်။ ဒီဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာတွင်ပထမဆုံး crypto အကြွေစေ့သည် Bitcoin ဖြစ်သည်။
လေးလတစ်ကြိမ်ရော Dow ပြန်လည်ပါ ၀ င်မှုအတွက်အချိန်ရောက်ပြီ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 8, 2020 စက်တင်ဘာလ 6, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
မှထူးခြားသောအားသာချက်တွင် အဆိုပါ Dow ၏ Durig ရဲ့ Dogs ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးလတစ်ကြိမ်ပြန်လည်ချိန်ညှိမှုဟာ Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှအား Exxon Mobil နဲ့ Pfizer နှစ်ခုလုံးကို Dow ကနေဖယ်ရှားတော့မယ်ဆိုတာပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ငါတို့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကို Dogs အစုစုထဲကနေဖယ်ထုတ်ပြီးသားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နှစ်မှယနေ့အထိကျဆင်းနေဆဲဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏သုံးနှစ်နှင့်တစ်သက်တာနံပါတ်များသည် ၆.၈၃ တွင် ၃ နှစ်နှင့် ၇.၀၃ သက်တမ်းတို့အတွက်တော်တော်ကောင်းပါသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများသည်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သော်လည်းငြိမ်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်သာလွန်နေဆဲဖြစ်သည် အဆိုပါ Dow ၏ Element တွေကို Dogs ကို.
အဘယ်ကြောင့် TRON သည် Cryptocurrency Exchange Exchange ၏ဖြစ်စဉ်အတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောနည်း။
စက်တင်ဘာလ 4, 2020 စက်တင်ဘာလ 3, 2020 ဂျူလီမစ်	မှတ်ချက် Leave
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်မရေမတွက်နိုင်သောလျှို့ဝှက်နံပါတ်များစွာရှိသော်လည်း TRON သည် Cryptocurrency လဲလှယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စိတ် ၀ င်စားသောအသိုင်းအဝိုင်းတွင်အထူးနေရာတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ TRON သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းကို ဦး ဆောင်နေသည့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းမှစွမ်းအားပေးထားသော open-source blockchain အခြေခံ protocol ကိုရည်ညွှန်းသည်။ အုပ်စုတူအဆင့်တူအချင်းချင်းကွန်ယက်များ၏စွမ်းအားကိုအသုံးချသည်။ TRON ကိုလွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကအိုင်စီအို (ကန ဦး အကြွေစေ့ရောင်းဝယ်မှု) အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ဆက်စပ်သောငွေကြေး Tronix (TRX) ရှိသည်။ စျေးကွက်တွင်ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်သည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအဖြစ်လူကြိုက်များမှုများစွာကိုရရှိခဲ့သည်။
Bitcoin သည် COVID-19 Pandemic အားမည်သို့တုံ့ပြန်ခဲ့သနည်း။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 2, 2020 စက်တင်ဘာလ 1, 2020 ယာကုပ်အမျိုးကို Maslow	မှတ်ချက် Leave
COVID-19 ကူးစက်ရောဂါသည်လူတိုင်းကိုသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤကပ်ရောဂါသည်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်၏ပြင်းထန်သောသဘာဝကြောင့်မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များသည်သူတို့၏အမြတ်အစွန်းများများကိုခန်းခြောက်စေပြီးအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းခံရသည်။ ကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်ကြိုးပမ်းရာတွင် ၀ န်ထမ်းများကိုအလုပ်မှထုတ်ပယ်ခဲ့ရသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်မိသားစုများစွာသည်၎င်းတို့မည်သို့အဆုံးသတ်မည်ကိုသိလိုကြသည်။
စက်တင်ဘာလ 1, 2020 သြဂုတ်လ 31, 2020 ဂျူလီမစ်	1 မှတ်ချက်
စိတ်ကူးမျှဝေပါ - စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်သည် ICO ၏အောင်မြင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လက္ခဏာသက်သေတစ်ခု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အခြေခံဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမစတင်ခင်သင်၏စိတ်ကူး၏နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုကိုအပြီးသတ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဒါဟာပြိုင်ဘက်များကပေးကမ်းကမ်းလှမ်းမှုထက်သာ။ ကောင်း၏ဖြစ်သင့်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှကန ဦး တုံ့ပြန်ချက်များကိုလူသိများသော cryptocurrency အသိုင်းအဝိုင်းများတွင်ကြေငြာပါ။ ၎င်းသည်သင်၏အကြံဥာဏ်သည်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်အကြားစိတ် ၀ င်စားမှုမြင့်မားမှုရှိ / မရှိဆုံးဖြတ်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏စီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်၎င်း၏စီးပွားရေးပုံစံကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်။
ကနေဒါခွဲထွက်ခွေးများသည် Breakout Year ရရှိထားကြသည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 28, 2020 သြဂုတ်လ 27, 2020 S & P 500 ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
အံ့အားသင့်စရာကောင်းတာကအအောင်မြင်ဆုံးကြီးထွားမှုနှင့်ရှယ်ယာများ ၀ င်ငွေအမြင့်ဆုံးဝင်ငွေကိုအမေရိကန်မှလာခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာအံ့ ising စရာကောင်းပေမယ့်ကနေဒါနိုင်ငံထဲကအကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းတွေ၊ လက်တွေကိုကျဆင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ The S & P 500 ၏ခွေးများ၅-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှာငါတို့စတင်ခဲ့တာက ၃၅% ကျော်သွားပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးဆောင်းပါးတွင်နှစ်လအတွင်း ၁၇% တိုးတက်ခဲ့ပြီး၊ဒီပုံပြင်ကအရမ်းဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်။"ကောင်းပြီ, ထိုအရပ်မှနှစ်ဆ။
Durig ၏ S&P Dividend Aristocrat အစုစုသည်အခြေခံကြီးထွားမှုနှင့်အမျိုးမျိုးသော Dividend ၀ င်ငွေများကိုပါရည်ရွယ်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 25, 2020 သြဂုတ်လ 24, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ရေ တီထွင်ခဲ့သည် S&P Dividend အရစ္စတိုတယ် Aristocracy နိယာမတိုးတက်မှုနှင့်အလွန်ကောင်းသောအမျိုးမျိုးသောမြတ်များဝင်ငွေနှစ်ခုလုံးကိုပစ်မှတ်ထားအစုစု။ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်များ၏သမိုင်းသူတို့အဖြစ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအလွန်အကျိုးဖြစ်ခဲ့သည် သူတို့ရဲ့ရွယ်တူချင်း outperformed ပါပြီ။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများနှင့်ဖောက်သည်များချစ်သောအမြဲတမ်းပြOneနာတစ်ခုမှာသူသည် Aristocratic ဖြစ်ရန်ကုမ္ပဏီသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူတို့၏အမြတ်များကိုတိုးမြှင့်ရမည်။ CFO၊ စီအီးအို၊ COO စသည့်အခကြေးငွေများများစားစားမပေးပဲကုမ္ပဏီများသည်အစုရှယ်ယာရှင်များကိုပထမ ဦး ဆုံးလာရောက်ရန်ဤကုမ္ပဏီများကပြဌာန်းထားသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ယူဆကြသည်။ လောလောဆယ် the S&P Dividend အရစ္စတိုတယ် နှုန်းသည် ၄.၄၂% ဖြစ်ပြီး၊ ဤသည်အလွန်ခက်ခဲသောနှစ်ဖြစ်သော်လည်းအစုရှယ်ယာဝင်ငွေအတူတူ ၀ င်ငွေရှိမော်တော်ယာဉ်အများစုထက်သာလွန်သည်။
Cryptocurrency ဖလှယ်မှုအပေါ်တစ် ဦး ကအကျဉ်းသမိုင်း
သြဂုတ်လ 21, 2020 မတ်လ 29, 2021 Mia Perla	မှတ်ချက် Leave
လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်အတွင်း 'ခရင်မ်တို' ဟူသောစကားလုံးသည်မှော်အတတ်မှဇီဝဗေဒသို့ကူးပြောင်းခြင်းကိုမြင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးရန်ပုံငွေသို့ကမ္ဘာသို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်ကမှေးမှိန်သွားခြင်းဟုသတ်မှတ်ခဲ့သောနည်းပညာအပိုင်းအစတစ်ခုသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္financeာရေး၏ရှုခင်းကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုရိုင်းစိုင်းသောလူအနည်းငယ်ကယူဆခဲ့ကြသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင် Satoshi Nakamoto သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဆယ်ခုကိုဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ဂျာမှတဆင့် Hal Finney အမည်ရှိအခြားလူထံပေးပို့ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဘဏ္theာရေးကဏ္aတွင်တော်လှန်ရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ အနှစ်သာရအားဖြင့်၎င်းသည်ရာစုနှစ်များစွာအတူတကွလုပ်ဆောင်ခဲ့သောဘဏ္ofာရေးနှင့်ငွေကြေးအယူအဆကိုစိန်ခေါ်သည့်ယဉ်ကျေးမှုကောင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။
White Label Cryptocurrency Exchange ကိုပေးသည့်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုနှင့် ပတ်သက်၍ တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရယူပါ
သြဂုတ်လ 19, 2020 ဇြန္လ 1, 2021 ဂျူလီမစ်	1 မှတ်ချက်
ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်လျင်မြန်စွာတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားစွာရရှိရန်တိုက်တွန်းခြင်းနှင့်အတူ၊ ၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နေသောဘဏ္andာရေးစျေးကွက်များနှင့်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဘဏ်များအတွက်အလားအလာရှိသောရွေးချယ်စရာဖြစ်လာသည် ဤအချိန်သည်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဤအမြတ်အစွန်း tool ကိုမှအမြတ်ထုတ်ရန်များအတွက်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
Cryptocurrency Exchange Exchange ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမောင်းနှင်နေသည့်အပြောင်းအလဲများကိုရှာဖွေခြင်း
သြဂုတ်လ 14, 2020 သြဂုတ်လ 14, 2020 ဂျူလီမစ်	မှတ်ချက် Leave
ယေဘုယျအားဖြင့် cryptocurrency လဲလှယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စီးပွားရေးသည်ပါတီများကိုပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေပြီးစင်မြင့်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်အာရုံစိုက်သည်။ သို့သော် blockchain နည်းပညာသည်သမားရိုးကျစတော့အိတ်ချိန်းများတွင်လုပ်ငန်းတိုးတက်စေရန်ကြိုးပမ်းနေသောကြောင့်ဂိမ်းကိုပြောင်းလဲနေသည်။
S&P ၏ခွေးများ - ၅.၅% အမြတ်အစွန်းမှဝင်ငွေနှင့်ခိုင်မာသောအခြေခံများ - သင့်အတွက်လား။
သြဂုတ်လ 12, 2020 သြဂုတ်လ 11, 2020 S & P 500 ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
အလွန်ကောင်းတဲ့ 2019 နှင့် 2018 ပြီးပါကသည် S & P ၏ခွေးများ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ယခုနှစ်တွင် ပို၍ စိန်ခေါ်မှုရှိပုံရသည်။ ပြောင်းလဲနေသောအလေးချိန်၊ သုံးလတစ်ကြိမ်ပြန်လည်ထိန်းညှိခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကုန်သွယ်ခြင်းတို့၏အပြုသဘောဆောင်သောသက်ရောက်မှုများရှိသော်လည်း၎င်းသည်အများစုထက်ပိုမိုပြင်းထန်သောနှစ်ဖြစ်သည်။ ၀ င်ငွေအခြေပြုရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ၅.၅% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၊ S & P ၏ခွေးများ နှိုင်းယှဉ်အလွန်ကောင်းစွာပွုပါပွီ။
Bitcoin Market ကို Beat သော Beginner
သြဂုတ်လ 9, 2020 သြဂုတ်လ 8, 2020 ခရစ္စတိုဖာ Flint	မှတ်ချက် Leave
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါထုတ်ဝေခဲ့သည် "Bitcoin တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက် Beginner ၏လမ်းညွှန် (သင်စတင်သည့် $ 10 အခမဲ့ Bitcoin အပါအဝင်)” “ get-rich quick” အစီအစဉ်များနှင့်မတူဘဲ“ Beginner's Guide” သည်ကြိုးစားရရှိသောငွေကြေးများကိုလိမ်လည်သူများကိုလွှဲပြောင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတစ် ဦး သည်သူတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိလျှင်မည်သို့သင်ယူနိုင်မည်နည်း။
ဥရောပခွဲခြားခွေးများ - ဥရောပသည်ယခုအခါတိုးတက်လာလျှင်အချိန်ဖြစ်နိုင်သလား။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 1, 2020 ဇူလိုင်လ 31, 2020 ဥရောပ၏ခွေးများ	မှတ်ချက် Leave
ငါတို့သည်သင်တို့အပေါ်ကို update ချင်တယ် ဥရောပ၏ခွေးများ။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်း ၀ င်ငွေနှင့်ကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုများကိုပို့ဆောင်ပေးသောကျဉ်းမြောင်းသော Aristocratic အစုစုဖြစ်သည်။ အစုစုသည် ၆% ကျော်အနည်းငယ်သာပေးပြီး၎င်း၏တိုတောင်းသောသက်တမ်းတွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း၊ ကနေဒါခွဲဝေခွေး။
ဤသည်ခိုင်မာသည့် ၀ င်ငွေနှင့်အမျိုးမျိုးသောမဟာဗျူဟာနှင့်ဒီဇိုင်းသည်အမေရိကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အမြတ်များများပေးရသောဥရောပကုမ္ပဏီများအတွက်ထူးခြားသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥရောပသည်သိသာထင်ရှားသည့် COVID-19 နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စီးပွားရေးဖိစီးမှုများစွာရှိသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောအခါ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်သည်။
အထိရောက်ဆုံး ICO စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာရှာဖွေခြင်း
ဇူလိုင်လ 31, 2020 ဇူလိုင်လ 30, 2020 ဂျူလီမစ်	မှတ်ချက် Leave
လူကြိုက်များသောနည်းလမ်းများအားသင်၏ ICO ကိုစျေးကွက်သို့တင်နိုင်ရန်
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး - သီးသန့်အင်တာဗျူးများနှင့်သတင်းထုတ်ပြန်မှုများမကြာခဏထုတ်လွှင့်ရန်လူသိများသောမီဒီယာကိုငှားရမ်းရမည်။ ကုမ္ပဏီ၏ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလက်လှမ်းမီမှုပါဝင်သောကြောင့်ကောင်းစွာစီစဉ်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုထိန်းသိမ်းရန်အဖွဲ့တစ်ခုကိုငှားရမ်းရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤသည်ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုအကြားပိုမိုမြင့်မားထိတွေ့မှု ဦး ဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
12...6ပို့စ်အဟောင်းများ